परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरको कामलाई चिन्‍नु | अंश २१३ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
विजयको कामको मुख्य उद्देश्य भनेको मानवतालाई शुद्ध पार्नु हो जसले गर्दा मानिसले सत्यतालाई प्राप्त गर्न सक्छ, किनभने मानिसले सत्यलाई अत्यन्तै थोरै मात्र बुझ्‍छ! त्यस्ता मानिसहरूमा विजयको काम गर्नु भनेको निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तिमीहरू सबै जना अन्धकारको प्रभावमा परेका छौ र तिमीहरूलाई गहिरो चोट लागेको छ। त्यसैले यो कामको लक्ष्य भनेको तिमीहरूलाई मानव प्रकृतिबारे जान्न र सत्यतामा जिउन सक्षम गर्नु हो। सिद्ध हुनु भनेको यस्तो कुरा हो जसलाई सृष्टि गरिएका सबै प्राणीहरूले स्विकार्नुपर्छ। यदि यस चरणको काममा मानिसहरूलाई सिद्ध गर्ने कार्य मात्रै समावेश भएको भए, यो ब्रिटेन, वा अमेरिका, वा इजरायलमा गर्न सकिन्थ्यो; यसलाई कुनै पनि राष्ट्रको मानिसहरूमा गर्न सकिन्थ्यो। तर विजयको काम छनोट गर्ने खालको छ। विजयको कामको पहिलो चरण अल्पकालीन हो; यसबाहेक, यो शैतानको अपमान गर्न र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई जित्नका लागि प्रयोग गरिनेछ। यो विजयको प्रारम्भिक कार्य हो। कसैले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने कुनै पनि प्राणीलाई सिद्ध गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सक्छ किनभने सिद्ध हुनु भनेको दिर्घकालीन परिवर्तनपछि मात्र प्राप्त गर्न सकिने कुरा हो। तर विजयी गरिनु भनेको फरक कुरा हो। विजयको लागि नमूना र प्रतिरूप सबैभन्दा पछाडि भएको हुनुपर्दछ, गहिरो अन्धकारमा रहनुपर्छ; तिनीहरू सबैभन्दा नीच, परमेश्‍वरलाई मान्न सबैभन्दा अनिच्छुक र परमेश्‍वरप्रति सबैभन्दा अनाज्ञाकारी हुनुपर्दछ। यो ठ्याक्कै त्यस्तै किसिमको व्यक्ति हो जसले विजय प्राप्त गरिएको बारेमा साक्षी दिन सक्छ। विजयको कामको मुख्य लक्ष्य भनेको शैतानलाई हराउनु हो, जबकी मानिसहरूलाई सिद्ध बनाउनुको मुख्य लक्ष्य भनेको मानिसहरूलाई प्राप्त गर्नु हो। यो विजय गरिएपछि मानिसहरूमा विजयको कार्य तिमीहरू जस्तै मानिसहरूमा गरिएको छ भन्‍ने कुराको साक्षी छ भन्‍ने कुरालाई सक्षम गराउनु हो। विजय प्राप्त गरेपछि मानिसहरूलाई साक्षी दिन लगाउनु यसको उद्देश्य हो। यी विजय गरिएका मानिसहरूलाई शैतानको अपमान गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गरिनेछ। त्यसो भए, विजयको मुख्य विधि के हो? सजाय, न्याय, श्रापहरू र खुलासा—मानिसहरूलाई जित्नको लागि धर्मी स्वभावको प्रयोग गर्ने, ताकि तिनीहरू परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावको कारण पूर्ण रूपमा विश्‍वस्त हुन सकून्। मानिसहरूलाई विजय गर्न र तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा विश्‍वस्त बनाउनको लागि वचनको यथार्थता र अधिकारको प्रयोग गर्नु—विजय गरिनुको अर्थ यही हो। सिद्ध गरिएका व्यक्तिहरूले विजय प्राप्त भएपछि आज्ञाकारीतालाई मात्र प्राप्त गर्न सक्षम हुँदैनन्, उनीहरू न्यायको कामको ज्ञान प्राप्त गर्न, आफ्नो स्वभाव बदल्न, र परमेश्‍वरलाई चिन्न पनि सक्षम हुन्छन्। तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने मार्गको अनुभव गर्छन् र सत्यले भरिन्छन्। उनीहरू परमेश्‍वरको कार्यलाई कसरी अनुभव गर्ने, परमेश्‍वरको लागि कष्ट भोग्‍न सक्‍ने र उनीहरूको आफ्नै इच्छा-शक्तिहरू पाउन सक्षम हुने भन्‍ने कुराहरू सिक्छन्। सिद्ध पारिएकाहरू तिनै हुन् जोसँग परमेश्‍वरको वचनको अनुभव पाएको कारणले सत्यको वास्तविक ज्ञान छ। विजय गरिएकाहरू तिनै हुन् जसले सत्य जान्दछन् तर सत्यको वास्तविक अर्थलाई स्वीकार गरेका छैनन्। विजय गरिसकिएपछि, तिनीहरूले आज्ञापालन गर्छन्, तर तिनीहरूको आज्ञाकारीता भनेको उनीहरूले पाएको न्यायको परिणाम हो। तिनीहरूसँग धेरै सत्यहरूको वास्तविक अर्थको बारेमा कुनै पनि बुझाइ छैन। तिनीहरूले सत्यलाई मौखिक रूपमा स्वीकार्छन्, तर उनीहरू सत्यमा प्रवेश गरेका छैनन्; तिनीहरू सत्यलाई बुझ्छन्, तर तिनीहरूले सत्यको अनुभव गरेका छैनन्। सिद्ध गरिएकाहरूमा गरिने काममा जीवनको प्रावधानसँगै दण्डहरू र न्यायहरू हुन्छन्। सत्यमा प्रवेश गर्नुलाई मूल्यको ठान्‍ने व्यक्ति नै सिद्ध गरिनुपर्ने व्यक्ति हो। सिद्ध गरिएकाहरू र विजय गरिनुपर्नेहरूको बीचमा रहेको भिन्‍नता भनेको उनीहरू सत्यमा प्रवेश गर्छन् की गर्दैनन् भन्ने नै हो। सिद्ध पारिएकाहरू तिनीहरू नै हुन् जसले सत्यलाई बुझ्दछन्, सत्यमा प्रवेश गरेका छन् र सत्यमा जिइरहेका छन्; सिद्ध गर्न नसकिने मानिसहरू तिनीहरू नै हुन् जसले सत्यलाई बुझ्दैनन् र जो सत्यमा प्रवेश गर्दैनन्, अर्थात जो सत्यमा जिइरहेका छैनन्। यदि यस्ता मानिसहरू अहिले पूर्ण रूपमा आज्ञापालन गर्न सक्षम छन्, भने तिनीहरू विजय गरिएका छन्। यदि विजय गरिएकाले सत्यको खोजी गर्दैनन्—यदि तिनीहरूले सत्यतालाई पछ्याउँछन् तर यसमा जिउँदैनन् भने, यदि तिनीहरूले सत्यलाई हेर्छन् र सुन्छन् तर सत्यमा जिउने कार्यलाई बहुमूल्य ठान्दैनन् भने भने—तिनीहरूलाई सिद्ध पारिन सकिँदैन। सिद्ध पारिनुपर्ने मानिसहरूले सिद्धको बाटोमा हिँड्दै परमेश्‍वरको आवश्यकताहरू अनुसार सत्यको अभ्यास गर्छन्। यस मार्फत, तिनीहरूले परमेश्‍वरको इच्छालाई सन्तुष्ट गर्छन् र तिनीहरूलाई सिद्ध पारिन्छ। विजयको काम समाप्त हुनु अघि अन्त्यसम्‍मै पछ्याउने जोकोही व्यक्ति विजय गरिएको व्यक्ति हो, तर सिद्ध पारिएको व्यक्तिको बारेमा त्यसो भन्न सकिँदैन। “सिद्ध पारिएका” ले ती मानिसहरूलाई जनाउँछ जसले विजयको काम समाप्त भएपछि सत्यलाई पछ्याउन सक्छन् र परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिएका हुन्छन्। यसले ती व्यक्तिहरूलाई जनाउँछ जो विजयको काम समाप्त भएपछि संकष्टमा दृढ भएर खडा हुन्छन् र सत्यमा जिउँछन्। विजय गरिनु र सिद्ध गरिनुलाई कामको चरणमा हुने फरक र मानिसहरूले सत्यलाई बुझ्ने र त्यसमा प्रवेश गर्ने कुरामा रहेको फरकको हदले भिन्‍नता छुट्याउँछ। सिद्ध हुने बाटोमा नहिँडेका ती सबै, अर्थात् जोसँग सत्यको स्वामित्व छैन, उनीहरूलाई अन्ततः हटाइनेछ। जोसँग सत्य छ र जो सत्यमा जिउँछ तिनीहरूलाई मात्रै परमेश्‍वरले पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। अर्थात्, पत्रुसको स्वरूपमा जिउनेहरू सिद्ध पारिएकाहरू हुन् भने अरू सबै विजय गरिएकाहरू हुन्। विजय गरिएकाहरूमा गरिएका काममा श्रापहरू दिने, सजाय दिने, र क्रोधको प्रदर्शन गर्ने कार्यहरू समावेश हुन्छन् र तिनीहरूमा आउने भनेको धार्मिकता र श्रापहरू हो। त्यस्ता व्यक्तिमा काम गर्नु भनेको कुनै समारोह वा शिष्टाचारविना प्रकट गर्नु हो—उनीहरू भित्रको भ्रष्ट स्वभावलाई उजागर गर्नु ताकि उनीहरू आफैले यसलाई पहिचान गरून् र पूर्णरूपमा विश्‍वस्त होऊन्। जब मानिस पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी हुन्छ, विजयको काम समाप्त हुन्छ। अधिकांश मानिसहरूले अझै पनि सत्यलाई बुझ्नको लागि प्रयास नगरे पनि विजयको काम समाप्त भएको हुनेछ।